Monday November 05, 2018 - 10:16:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan 17 qof ayaa lagusoo waramaya inay duufaanadan ku dhinteen, in kabadan 50 meeyo kalena waxaa la dhigay isbitaalada caafimaadka, kuwaas oo ay sii dheer tahay burburka hantiyeed ee duufaanada ay geysteen.
Gobolada Tarintino iyo Veneto oo dhaca woqoyiga wadanka Talyaaniga ayaa ahaa goobaha ay sida daran u saameeyeen roobabka iyo duufaanada, waxaana lagasoo sheegayaa in meelaha qaar dadka uu la go’ay dhulka, halka tuulooyin badan ay biyuhu go’doomiyeen, sidoo kalena ay jareen dariiqyadii lagu gaari lahaa.
Roobabkan ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwii ugu xooganaa ee ka da’a wadanka talyaaniga tobankii sano ee lasoo dhaafay, dadka deegaankana waxa ay sheegayaan in biyuhu ay maasheeyeen magaalooyin waaweyn oo labadan gobol katirsan.
Gudiga Isutaga beeraleyda wadanka Talyaaniga ayaa sheegay in duufaanada ay jareen, in ka badan 14 Million oo geed, kuwaas oo u badnaa dhirta miraha leh, waxa ayna tilmaameen in muda dhan 1 Qarni ay u baahan yihiin si ay ugasoo kabsadaan dhibaatada soo gaartay.
Deegaanada ay illaa iyo hada roobabku ka da'ayaan ayaa lasoo sheegayaa in ay isku xiran yihiin lagasoo bilaabo gobolka Veneto ee dhaca woqooyiga dalka illaa magaalada Saqliyah oo dhacda koofur galbeed wadanka Talyaaniga, dowladana waxa ay bilowday howlo loogu gurmanayo dadka ku saamoobay roobabka iyo duufaanada halkaas ka soconaya.
In ka badan 4 Kun oo shaqaalaha gurmadka degdega ah oo isticmaalaya doomo dheereya iyo diyaaradu ayaa lasoo sheegayaa inay u jiheysten dhanka gobolada ay daadka iyo duufaanada ka dheceen, si ay usoo badbaadiyaan Kumanaan dad ah oo halkaas ku go’doonsan, kuwaas oo aan heysan wax ay cunaan iyo biyo nadiif ah oo ay cabaan.
Vetekanka Talyaaniga ayaa isna sheegay in tiro kaniisada ah ay ku burbureen duufaanada, kuwaas oo ku yaala woqooyiga wadanka, waxa ayna ku baaqeen gurmad degdeg ah oo la la gaaro dadka gaalada ah ee halkaas ku dhibaateysan.
Wasaarada maaliyada wadanka Talyaaniga ayaa ka dhawaajisay, in khasaaraha ka dhashay roobabka hada soconayaa uu kor u dhaafayo 1.1 Million oo Euro, iyadoona intaas ku dartay in saacad walba la filan karo in khasaaraha uu isasoo taro.
Wadanka Talyaaniga ayay waayadan dambe kusoo badanayeen masiibooyinka rabaaniga ah eek a dhalanaya roobabka, duufaanada iyo burburka qaar kamid ah dhismayaasha waaweyn kuwaas oo sabab u noqday sanadkan gudahiisa oo kaliya, dhimashada in kabadan 1800 oo qof.
14ki Bisha August ee sanadkan 2018ka ayay ahayd markii buundo weyn oo ku taala magaalada Jinow oo dhacda woqooyi galbeed wadanka Talyaaniga ay ku dhinteen, in kabadan 40 qof, kadib markii roobab xoogan ay halkaas ka da’een.
Buundada oo aheyd mid si aad ah loo isticmaalo ayaa la sheegay in mar qura ay soo go’day, waxaana burburtay ilaa 200 Mitir oo buundada ka tirsan, taas oo lagu tilmaamay Masiibo Rabaani ah, sida laga soo xigtay madaxda dalka talyaaniga.